हिजाे खाते भनेर अप’मान गर्ने-हरू आज स्याबास भन्दै धाप मार्छन.. – live 60media
हेपिएको मानव हुँ खाते मेरो नाम छ, फालि:एको फोहोर हुँ सहर हिँड्ने काम छ, पेट पाल्छु जुठोले फोहोर भित्र खोजेर, कर्म मेरो खोटो छ, कहाँ पाउँछु रोजेर, कर्म मेरो अभागी लक्ष्य मेरो हरायो, कसैको आस गर्दै थिएँ । खाते भनी करायो ।”चर्चित र्‍यापर स्वर्गीय यम बुद्ध’काे एउटा र्‍यापमा समा-वेश यी शब्दले राजु अधिकारीको मन लाई छुन्छ । आमाबुवाकाे काखमा छुन मुनाउने, विद्यालयमा कखरा सिक्ने उमेर उनले सड’कमै बिताए । एक दशककाे सडक’बासका क्रममा उनले थुप्रै दुःख झेले, अप’मान सहे ।
त्यसैले यम बुद्धकाे र्‍यापमा प्रयाेग भएका माथि उल्लि:खित शब्दले उनलाई तान्छ । र, दाेहाेर्‍’याएर सुन्छन्, अनि पुराना दिन सम्झेर भा’वुक हुन्छन् । ‘मैले जस्ताे दुःख नभाेग्ने-हरूलाई यी शब्दले कुनै भाव दिन नसक्लान् तर मेरा लागि यी शब्द-भित्र त्याे सिंगाे १० वर्षे जीवन छ।
मैले भाेगेका अथक दुःखका फेहरिस्त छ,’ राजु गम्भीर मुद्रामा देखिन्छन्, ‘धेरै पछि एक-छाक मीठाे खान पाउँदा’काे खुसी छ, कुनै गल्ती नगर्दा पनि खानु-परेकाे गाली छ, भाेक, ब्यथा, राेदन सबथाेक छ ।’१० वर्षसम्म सडकमा प्लास्टिक टिपेर जीवन गुजार्ने क्रममा कतिले लात हाने हाेलान्, कतिले अ’श्लील शब्दले गा’ली गरे हाेलान्, कतिले दया पनि देखाए हाेलान! एक-दुई जनासँग मात्र ठाे’क्किएकाे भए पाे उन’लाई कुनै विशेष अप’मानकाे क्षण थाहा हुन्थ्याे।
‘धेरै छ, भनेर सकिँदैन,’ राजु यत्तिकैमा रोकिए । समय-क्रमसँगै अहिले उनकाे अवस्था बदलिएकाे छ । सडककाे कहाली-लाग्दाे जीवनबाट निस्केर उनी अहिले विश्व समुदायमा नेपालकाे नाम चिनाउन लागेका छन् । हाे, राजु आज हकी खेलका राष्ट्रिय खेलाडी हुन् ।नेपालका जाने-मानेका खेलाडीलाई हकीमा हराएका उनले नेपालको नेतृत्व गर्दै चार वटा देश वि’रुद्ध खेलिसकेका छन् । यति मात्र हाेइन, कुनै बेलाका सडक बालक राजु आज स्वयं सडक बाल-बालिकाका ‘उद्धारक’ पनि बनेका छन् ।
हेटाैंडाका २० वर्षीय उनले ५० जना-भन्दा बढी सडक बाल-बालिकालाई आश्रयस्थलमा ल्याएका छन्, लेख्ने, पढ्ने अवसर जुराइ-दिएका छन् । अहिले धेरैले राजुलाई ‘देशको नाम राख्ने राष्ट्रको छोरा’ भन्छन् ।उनी सामाजिक-सञ्जालमा पनि चर्चित छन्- कारण, उन काे विगत र सबैलाई लठ्ठ पार्ने उनको भावुक अभि:व्यक्ति । विस्तृतमा यो खबर शिलापत्रमा सम्झना घिमिरेले लेख्नु भएको छ ।
← पब्जी र फ्रिफायर जस्ता अनलाईन खेल नेपालमा पनि बन्द गर्न माग !
युवतीलाई यसरी जालमा पार्थे राज, दैनिक कमाउथे १० लाख, यी २ सुन्दरीसँग पनि कनेक्सन →